Farqiyada u dhexeeya Desktop ah oo ah Online FLV Converter
> Resource > Video >-barbardhig Desktop iyo An Online FLV Converter
Ma dhibaatooyin daawashada ah file warbaahinta FLV ah ee aad taleefan Android mobile ku haysa? Ma ahan goor dambe si aad u ogaadaan in codsiga Flash mobile ayaa dhab ahaan la iska daayeen by Adobe. Sidaa awgeed aad u baahan doontaa in labada download Flash ka Player gacanta ama isku day in aad loogu badalo files ka hor Radidiyaha ku saabsan telefoonka mobile Android.
Si aad u soo bixi Player Flash ah, waxa uu ku talinayaa in aad aqriso u geliyey Adobe ee Bulshada . Marka lagu rakibay, isku day ah Flash-site furo si loo arko haddii shaqeeya. Haddii kale, isku day inaad ku badalo iyada oo ah Converter online FLV (Habka 1) ama Converter desktop (Habka 2) .
Habka 1: FLV Online Converter
Habka ugu sahlan waa in loogu badalo files FLV aad online. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa la xidhiidha internetka. Waqtiga loo baahan yahay xidhiidhka ka xiran tahay tirada file aad iyo sidoo kale xawaaraha ee la xidhiidha. Waxaad u bedeli karaan faylasha FLV aad la mid ah kuwa ku jira Liiska Online Video converters . Dhamaan converters FLV online ku qoran sidoo kale jiri doona si loogu badalo files si aad u tiro ka mid ah qaabab kala duwan loo maqli ku saabsan qalabka telefoonada gacanta Android awoodaan. Gaar ahaan MP4 ah; tani waa dheeraad ah oo ku haboon u arkaysid on yar size shaashad.
Waxaad kartaa jiitaa-iyo-hoos u dhac in ay geliyaan faylasha aad (waxay ku xiran tahay doorashada converters online) ama waxa ay caleenta ka folder deegaanka. Haddii ay taageerayaan, waxa kale oo aad nuqul ka karaa iyo paste URL ee sanduuqa Upload ah. Ka dib markii in, si fudud u gala ama guji badalo button.
Converter desktop A waa ka sii fiican marka ay timaado in diinta aad files warbaahinta FLV ku yaalla. Waxaad u bedeli karaan oo keliya file ah oo waqti la converters FLV online. Si kastaba ha ahaatee, la Wondershare Video Converter Ultimate , aad si toos ah u gali kartaa faylasha sida ugu badan aad rabto. On top of in, waxaad yeelan doontaa in ay dheeraad ah oo aad files warbaahinta sameeyo sida qaar ka mid ah tafatirka asaasiga ah ka hor inta aan diinta ama ku gubi gal DVD ah.
Waxa kale oo aad u waxtar u leedahay horena u ahaa qaabab wax soo saarka wajihi doonta goobaha ugu fiican. Interface quruxsan oo weli user-friendly waxa uu ka dhigayaa xitaa sahlan kuwa aan weligood loo isticmaalo software sida ka hor, laakiin weli weli si ay u qabtaan wax kasta oo ay u baahan yihiin awood.
Si fudud u akhri siyaabaha kala duwan ee hoos u tilmaamo ay tallaabo-tallaabo.
Xulashada 1: U beddelaan si ay u Device Android gaarka ah
Halkii isagoo ogaado taas oo ah meel wax soo saarka ama qaabka ugu wanaagsan ee lagu talinayaa in aad telefoon Android mobile, inaad sameyso oo dhan waa u dooran ku salaysan Device.
Jiid-iyo-hoos u files FLV aad,
Dooro nooca Device ka Qaabka Output ,
Xulashada 2: ayeey Files
Jar ama noola aad videos si kastaba ha ahaatee aad rabto in aad, ama xitaa ilaa xad ah ee codsanaya saamaynta gaar ah. Waxaad sidoo kale gelin kara Cinwaan dibadda si aad u buuxiso video.